Madaxweyne, adigoo raali ah ayaan kaa codsan inaad su`aashan nooga soo jawaabto. Waxaa kaloo qoraalka raacsan, talo yara oo aan rajeyn in ay anfac yeelan doonto. Arbacadii la soo … Continue Reading →
Waxaa shaley oo bishu aheyd 05/2-2017 soo dhamaadey soo jeedintii qorshaha siyaasadeed ee musharaxiinta u sharaxan xilka madexweyne. Mudo sadex beri ayay 23.musharaxiin ku soo bandhigayeen qorshahooda siyaasadood iyo waxa … Continue Reading →
Dee ma kuu sheegaa, waxuu yidhi
Horumarka teknologi ee la gaarey iyo isticmaalka baraha bulshadu ku kulmaan (Socail Media), ayaa suurta geliyay in dadad badan oo aan is aqoon macluumaad kala gedisan dhex maraan. Aniga waxaan … Continue Reading →
Qoraalkan waxaa markii hore laga soo saarey webiste-ka Hiiran.com- 31/1-17! Mudo aan dheereyn ayaa baraha bulshada lagu soo bandhigey faaxisho kufsi oo aad u fool xumeyd. Dhibkaa waxuu ka dhacey … Continue Reading →
Dib umilicsiga iyo dhacdooyinkii iigu weynaa ee 2016
Marka hore Ilaah mahadii oo sanad kale kheyr iyo wanaag noogu dhameeyay, mid hor lehna dhawaan noo bilaaban doono. Intii muslimiin ah oo ku le`atey sanadkaa, Ilaahow u naxariiso. Intii dhib kasoo gaareyna, Ilaahow … Continue Reading →
Buun-buuninta iyo wax qaloocinta waxaa ka fiican qoridda runta iyo waxa uu wanaaggu ku jiro
Waxaa jirtay in aan kowda bishan Disember ee 2016 ku soo qoray bogeyga twitterka qoraal kooban oo isugu jirey kaftan iyo dareen dhiiro gelin aan kala kulmay shir waalidiin oo … Continue Reading →
Beri wey dhaami maantey- inta kale….. “F”
Nolol maalmeedka qeyb ka mid ah ayaa ku saleysan wax xalin, sameyn, hagaajin ama xataa xumeyn iyadoo ay ku xiran tahey mas`uuliyada la heysto.Dhibaato markey dhacdana siyaabooyin kala gedisan ayaa … Continue Reading →
Isu saxida shukaansiga!
Waxaan wax yar ka taaban qaladaadka la galo markii shukaansi iyo guur raadinta lagu jiro. Hadii aan xariif laysku noqon, oo wax laysku sheegin jug jugtaa lee waaye, just like … Continue Reading →